भातरीयसँग किन पछि परे आयुष ? नेपाल आएपछि बल्ल खोले रहस्य, बिरामी भएका थिए आयुष, भिडियोमा हेर्नुहोस् « Swadesh Nepal
भातरीयसँग किन पछि परे आयुष ? नेपाल आएपछि बल्ल खोले रहस्य, बिरामी भएका थिए आयुष, भिडियोमा हेर्नुहोस्
काठमाण्डौ । सारेगमपबाट आफूले धेरै कुरा सिकेको नेपाली बालक आयुष केसीले बताएका छन् । भारतीय टेलिभिजन जी टीभीबाट प्रसारण हुँदै आएको सांगीतिक प्रतियोगिता सारेगमप लिटिल च्याम्प्समा चौंथो भएका आयुष सोमबार नेपाल फर्किएका हुन् ।
मंगलबार उनी अध्ययनरत भक्तपुरको मोडर्न बोर्डिङ स्कुलले गरेको सम्मान कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सारेगमपको यात्रा अनुभव साटे । प्रतियोगिताको उपाधि जित्न नसकेपनि उनले सारेगमपमा सिकेको सबै कुरा फलदायी हुने बताए ।
‘मैले धेरै कुरा सिकेर आएको छु’ उनले भने, ‘रियाज गर्ने तरिका मैले नेपालमा गरेको भन्दा फरक थियो ।’ अब नेपालमै बसेर आफ्नो पढाइसँगै गीत संगीतको यात्रा पनि अगाडी बढाउने उनको योजना छ । आयुष पढेको बिद्यालयले उनलाई प्रोत्साहन स्वरुप एक लाख नगद हस्तान्तरण समेत गरेको छ ।